तुलसीपुर वासीको ईज्जतका लागि कार्यक्रम : अरुण लहरे - Tulsipur Online
तुलसीपुर वासीको ईज्जतका लागि कार्यक्रम : अरुण लहरे
Posted by Admin | ३० चैत्र २०७४, शुक्रबार १४:५५ |
तुलसीपुर स्थित पार्क क्याफेमा आज बेलुका सात बजेदेखि नयाँ वर्ष २०७५ सालको उपलक्ष्यमा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदैछ एलाईन नेपालको आयोजनामा विशेष गरी पारा टेवुलटेनिस खेल र खेलाडिहरुको विकास,प्रवद्र्धनका लागि, मनोरन्जन प्रदान गर्नका लागि र समग्र तुलसीपुर वासीहरुको ईज्जतका लागि बेजोड सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदैछ । उक्त कार्यक्रमबारे कार्यक्रमका संयोजक अरुण लहरे संग गरिएको कुराकानी ।
कार्यक्रमको तयारी के छ ?
आज बेलुका सात बजेदेखि तुलसीपुरको पार्क क्याफेमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदैछ । सबै कलाकारहरु बेलुका पाँच बजे तुलसीपुर आउने कार्यक्रम तय भएको छ । सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । छुटपुट सानातिना काममा व्यस्त छौ ।
किन कार्यक्रम राख्नुभएको ?
विशेष गरी नयाँ वर्षको अवसरमा तुलसीपुरमा खासै कार्यक्रमको आयोजना हुदैनथ्यो । तुलसीपुरवासीहरु नयाँ वर्ष आउदा सधै अन्य ठाउमा गएर मनोरन्जन गुर्नपर्ने बाध्यता थियो । हामिले तुलसीपुरवासीहरुको ईज्जतका लागि कार्यक्रम राखेका छौ । तुुलसीपुरमा पनि यस्ता खालका मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम राखि तुलसीपुरवासीहरुको ईज्जत जोगाउनका लागि कार्यक्रम राखिएको हो ।
अव तुलसीपुरवासीहरु आफ्नो स्थान छाडि अन्य ठाउमा गएर नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ने छैन । आफ्नै ठाउमा पुरा मनोरन्जन लिन सक्नुहुनेछ । संगसंगै यो कार्यक्रम सामाजिक कार्यसंग पनि जोडिएको छ । हामिले यो कार्यक्रमबाट भएको आम्दानीको चालिस प्रतिशत रकम अपांगहरुका लागि खेलिने खेल पारा टेबुलटेनिसका लागि छुट्याएका छौ ।
रातिको समयमा कार्यक्रम राख्नुभएको छ , सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?
पक्कै पनि नयाँ वर्षको कार्यक्रम हो । हामिले राति १२ बजेसम्म कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा व्यवस्था राम्रो संग मिलाएका छौ । ईलाका,जिल्ला प्रहरी संग सहकार्य गरेका छौ । कार्यक्रममा सांसदहरु,पूर्व सांसदहरु ,एस.एस.पी लगायत विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सहभागीता हुने छ । त्यसैले कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
कार्यक्रमको समय तालिका कस्तो बनाउनु भएको छ ?
पहिला हामिले औपचारीक कार्यक्रम संचालन गर्छौ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्छौ । केहि विशिष्ठ व्यक्तिहरुको मन्तव्य राख्छौ । औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ । जसमा चर्चित गायक हेमन्त शर्मा हुनुहुन्छ । यसैगरी गायकिा रन्जु सुनाम,अंकित क्षेत्री,सल्यास व्याण्ड,औरा गुरुङ लगायतका कलाकारहरुले आफ्नो बेजोड प्रस्तुती प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
तुलसीपुरमा नयाँ वर्षको अवसर पारी कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौ । सबैको साथ र सहयोगले नै आगामी दिनमा यस्ता खालका कार्यक्रम पुन आयोजन गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रम हामि आयोजकको मात्र नभएर समग्र हामि सबै तुलसीपुरवासीको हो । कार्यक्रममा उपस्थितीको लागि सबैलाई अनुरोध गर्दछु । अन्तमा केहि कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँ लोकप्रिय मिडिया तुुलसीपुरअनलाईन लाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
Previousस्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु दाङमा, कर्मचारी भर्ना रोकिने
Nextप्रेस चौतारीको अधिबेशन, पत्रकारितालाई विकास र संबृद्धीसँग जोड्नुपर्ने